Mpempe akwụkwọ metal ationgha ọrụ - OUZHAN ahia (SHANGHAI) CO., LTD
Mpempe akwụkwọ metal nhazi Service-OEM China mpempe akwụkwọ metal Parts Manufacturer
N'ihi ndị injinia nwere ahụmahụ 10 na ihe karịrị usoro 30 nke akụrụngwa dị elu, Ouzhan dị mma na etu esi arụ ọrụ ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ maka afọ 15. Ouzhan na-enyere gị aka ịmegharị ngwaahịa gị site na DFM ma hụ na akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ gị nwere ike rụpụta nke ọma, nke ọma, yana ogo dabara na nkọwa gị. Anyị kwenyesiri ike na ịme mma jig maka ịgbado ọkụ iji kwado njikwa njikwa. Anyị ERP-enyere anyị aka jikwaa na-ụlọ n'ichepụta nke okokụre ngwaahịa na otutu SKUs.
Ngwaahịa anyị dị mgbagwoju anya arụpụtara ruo taa bụ nke 320 akụrụngwa. Anyị nwere ikike siri ike imepụta ihe mgbagwoju anya, akụkụ mpempe akwụkwọ dị elu. Usoro mgbakọ anyị anọ nwere ike ịkwado usoro nke abụọ na mmecha dịka ịgbado ọkụ, riveting, mkpuchi ntụ ntụ, anodizing, na mgbakọ. Anyị na-enwe ike inye sub-nzukọ ọrụ ma ọ bụ anapụta okokụre ngwaahịa.
Ouzhan nkenke mpempe akwụkwọ Metal nhazi ikike:
OuZhan nwere ikike inye ndi mmadu ihe eji emeputa ego nke ulo oru na ihe ndi ozo di elu maka otutu oru.
- Ndị ọkachamara nwere ọrụ ahaziri ahaziri maka ịme akwa maka iwu dị elu.
- Wide nso nke ịnara metal ihe.
- Wide dị iche iche nke oke ígwè (0.5mm-20mm).
- Otutu usoro nke akụrụngwa dị elu na usoro nchịkwa kachasị elu.
- Ọkachamara na iche iche nhazi usoro technology.
- Nrụpụta siri ike na oge nnyefe ọsọ ọsọ.
Ihe kpatara ị ga-eji họrọ Ouzhan Sheet Metal Fabric Services
• Cutchacha Laser CO2 na N2
• CNC mpempe akwụkwọ ekwe 4 & 6 Axis
• TIG, MIG, Ebe obibi
• Robot ịgbado ọkụ (ABB robot 1410 na Fronius ịgbado ọkụ System)
• ịgbado ọkụ notching
2. Otutu Secondary Usoro ikike
Na mgbakwunye na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, anyị bụ ọkachamara na TIG na MIG, ịgbado ọkụ robot, ịgbado ọkụ ntụpọ, ntanye mpempe akwụkwọ CNC, ịgbagharị, PEM, Laser Etching, wdg.Ya mere ị nwere ike inweta nnukwu nhọrọ nke akụkụ mpempe akwụkwọ site n'aka ndị otu anyị tụkwasịrị obi.
Anyị nwere ndị injinia 10 na ụlọ ọrụ R&D anyị, ha niile bụ ndị dọkịta ma ọ bụ ndị prọfesọ si Mahadum Sayensị na Teknụzụ nke China. Anyị nwere ike ịnye ọkachamara ọkachamara n'ụdị mpempe akwụkwọ na ọrụ nhazi mpempe akwụkwọ.
Anyị nwere ọkachamara àgwà nnyocha pesonel na equipments, dị ka mba ụkpụrụ gị ngwaahịa nwalee, na inye a zuru ezu ule akụkọ maka ahịa 'mpempe akwụkwọ metal akụkụ.
Ahaziri nha na shapes dị. Nabata ịkọrọ gị eserese nke akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ anyị, ka anyị rụọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndụ bụrụ ihe okike.
Gịnị Bụ mpempe akwụkwọ Metal-arụ ọrụ & Olee otú akpụ nke mpempe akwụkwọ Metal Works
Mpempe akwụkwọ abụghị ihe a kapịrị ọnụ. Kama nke ahụ, a na-eji okwu ahụ eme ihe maka ọla ndị e mebere ka ọ ghọọ ọdịdị. Dị ka a na-achị, mpempe akwụkwọ nwere akụkụ akụkụ anọ. Ọ bụkwa njirimara na ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ dị n'okpuru nke ogologo na obosara ya.
Na mgbakwunye na nchara, ọtụtụ ọla ndị ọzọ dịka ọla kọpa, aluminom na ọla edo yana ọla allo nwere ike ịhazi n'ime mpempe akwụkwọ. Iji mee ya ka ọ bụrụ mpempe akwụkwọ, agbanyeghị, ihe eji eme ihe kwesiri inwe njirimara ụfọdụ, yabụ, ọ ga-abụrịrị na ọ na-esiri ike ma sie ike, ma bụrụ nke nwere ike ịbụ ductile, ntụgharị. Ihe ndị a chọrọ na - egbochi mmachi n'ihe metụtara enwere ike iji ya. Ya mere, ọ gaghị ekwe omume ịhazi ihe na-emebi emebi ma ọ bụ ihe siri ike n'ime mpempe akwụkwọ.
Site na nke a, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ bụ ngwaahịa emechaala nke nwere ike mepụta karịa nnukwu mpaghara, ebe mpempe akwụkwọ na-adịkarị ọkụ, mkpa, kwụsie ike, na-agbanwe ma dị larịị. N'ihi nkọwa ndị a, ha kwesịrị ekwesị maka ụdị mkpuchi na mkpuchi niile. Na mgbakwunye, mpempe akwụkwọ nwere ike bụrụ ihe nrụrụ n'ọtụtụ ụzọ, yabụ enwere ike ịgbado ọkụ, gbagọrọ agbagọ, pịpụ ma ọ bụ bepụ. A pụrụ iji ụdị mpempe akwụkwọ mee ụdị dị iche iche dị iche iche, nke mere na ejiri ya dị ka ihe mmalite maka ngwaahịa dị iche iche.
Okwu a bụ "nhazi ihe eji eme igwe" kpuchitere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro nrụpụta. Ihu ọma, okwu mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ na-ezo aka na imepụta ngwaahịa, akụrụngwa na akụkụ nke ọla. Na mgbakwunye na ịgbado ọkụ, ịcha na ịgba, usoro nke nhazi mpempe akwụkwọ na-agụnye ịkụ ọkpọ, ịmepụta, ịgbanye na ịbanye. Mpempe akwụkwọ a na-eme ka mpempe akwụkwọ na-etinyekwa na nhazi mpempe akwụkwọ, yana ngalaba ndị na-esonụ:
• ịgbado ọkụ
• Ggba ncha
• kpọpu akụkụ
• Ihe osise
• constructionrụ ụlọ
• Layer akpụ
• Ngwunye kpo oku
• ekwe punching
• Mgbucha laser
• Nhazi laser
N'ime usoro nhazi nke mpempe akwụkwọ, a pụrụ imepụta ma mpempe akwụkwọ dị nro na nke na-eguzogide ọgwụ, na-eme ka njirimara dị iche iche nweta site na alloys dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịgbakwunye na nchara na mmiri mmiri n'oge arụ ọrụ igwe na nke na-ekpebi akụrụngwa akụrụngwa nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mepụtara. Na mgbakwunye na silicon, nickel na chromium, ihe ndị a gụnyere titanium, ọla kọpa, niobium na molybdenum.
Ngwongwo ihe eji eme ihe nke ihe eji eme ihe - Ihe eji eme ya
Dị maka mpempe akwụkwọ Metal machining
• Aluminom 5052H
• Aluminom T5, T6
• Ngwunye Nzuzo Oyi (CRS, SAPH440)
• Ngwongwo na-ekpo ọkụ (HRS)
• Igwe anaghị agba nchara (SS304, SS316, SS301)
Ouzhan Mpempe akwụkwọ Metal Surgha rụchara
Nke a bụ nhọrọ dị iche iche nke ọrụ nchara arụchachara ọrụ ị họọrọ maka akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji melite akụkụ ahụ, ịdị nro dị elu, nkwụsị corrosion, na njirimara ndị ọzọ: